The iPriest: Umu Afrika atọ egosila ụwa na Afrika di nkwadebe — Alisonomi
Umu Afrika atọ egosila ụwa na Afrika di nkwadebe — Alisonomi
Anya hụrụ ugo, fere ugo ajụ maka na ọ bughi ụbọchi nile ka a na-ahụ ugo anya. N’elu ụwa nke a anyi nọ n'ime ya, ọ bụ onye ọbụla ka ọ diri i zara aha nna ya. O nweghi onye ga-enye gi oke diri gi ma ọ bụrụ na i jighi aka gi were ya, maka na sọsọ obere umuaka ka a na-atinye nri n’ọnụ.
Ọ bụ ihe umu Afrika atọ gisiri ụwa n'izu ụka gara-aga. N'ụbọchi monde, onye isi ala mba Ruwanda na ndi obodo ya meputara Afrika ihụ site na imeputa ekwe nti bụ akwaa-akwụrụ. Mbọ Ruwanda gbara gosiri ụwa na Afrika anaghi arahụ ụra n'ihi na ọ ebe onye ọsọ rụrụ ka onye ije ga-emeche ruokwa. Nakwa na mgbe mmadụ pụtara n'ụra bụ ụtụtụ ya.
Nke abuọ, ụbọchi Fraide gara-aga, onye isiala mba Etiopia, Abiy Ahmed Ali, turu ugo onye ọchọ udo nke afọ 2019 n'ụwa nile. Maazi Abiy Ahmed Ali gosiri na udo na ihunanya bu ihe di mkpa na mmekọrita mba ọkachasi mba nodebere onwe ha nso. Ozigbo Maazi Abiy Ahmed Ali bidoro ọrụ dika onye isi ala, ọ gbara mbọ idozi esemokwu di na etiti Etiopia na Eritria. Ọ toghakwara ndi ndọrọ ndọrọ ọchichi obodo nọ n'ụlọ mkpọrọ. O nyekwara ndi nta akụkọ ohere ikwu uche ha.
I tiri ugo nke Maazi Abiy Ahmed Ali bu ezi ihe nyee Afrika n’ihi n’ụwa nile chere n’Afrika abughi mba udo.
Ihe ọzọ meputara Afrika ihu n’afọ a bu mmeri onye ọgba ọsọ maratọn nke Keṅa a na-akpọ Eliud Kipchoge meriri na mba Viena na ụbọchi Satọde gara-aga. Maazi Eliud Kipchoge bu Onye jibu ugo n'ọsọ maratọn jiri otu sekond gafere ugo o jibu na mbu. Mmeri Eliud Kipchoge gosiri ụwa n'Afrika abughi nani obodo ejiri nsogbu na agha mara, kama, ọ bụkwa mba ndi na-agba ọsọ na ndi na-achọ udo.
Posted by The iPriest at 11:08:00 pm
Baptism, this important sacrament we ignore - Alis...
À la Famille Myriam — Alisonomi
Restoring Sanity to Nigerian Religious Industry -...
Some Major Challenges of Every Young Missionary — ...
I had already pledge to Nigeria my Country - Aliso...
Tshiuetin en grève — Alisonomi
What a Christian Gathering is Not — Alisonomi
Faith and Church Services — Alisonomi
Ụmụada anyi ji eme ọnụ - Alisonomi
Let the cabals know — Alisonomi
Umu Afrika atọ egosila ụwa na Afrika di nkwadebe —...
Au Nord, chez le peuple rieur — Alisonomi
Ruwanda enyeela Afrika ụlọ ọrụ teknụzụ izizi nke n...
Girls of the East of Naija (I) - Alisonomi
A Blessed damned Nation - Alisonomi
Voici celle qui a dit OUI - Alisonomi
Mais qui en fin a Raison ? - Alisonomi
Angels Can Also Be Amerindians - Alisonomi
I Pledge to Nigeria My Own Country - Alisonomi